Hooggantoonni Biyyoota Addunyaa Ba'i Filannoo Ameerikaa Irratti Yaada Kennan
Sadaasaa 07, 2018
Hoogganoonni biyyoota Addunyaa, ba’ii filannoo walakeessa marsaa Yunaayitid Isteetis, ka paartiin dimookiraatotaa mana-maree bakka-bu’ootaa keessatti sagalee irra-aanaa itti argate ilaalchisee yaada adda addaa kennaa jiran.
Dimookiraatonni, mana-maree bakka-bu’ootaa keessatti injifannoon argatan akka Ameerikaaf guyyaa haarawa fide dubbatan. Garuu, kana jechuun, imaammata alaa Ameerikaaf lafti barihe, jechuu miti – jedhu – xiinxalaan siyaasaa – Piiter Truboowiz.
Chaayinaan haga ammaatti ba’ii fialannoo kana irratti yaada dubbachuu irraa of qusattee jirti. Ministarri dhimma-alaa Jarmanii – Hee’ikoo Maas, ba’iin filannoo kun, keessumaa, waa’ee dilaala Yunaayitid Isteets meeshaalee Awurooppaa dhaa galan irra keesse irratti wal-muddina jiru akka hin laaffisne dubbatan.
Dubbi-himaan Prezidaantii Raashiyaa – Dimitirii Peskoovis gama isaaniitiin, ba’ii filannoo kun hariiroo Raashiyaa fi Yunaaytitid Isteets gidduu kan hin jijjiirre tahuu dubbatan.
Prezidaant Joo Baayiden Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa Waliin Bilbilaan Marii Taasisan
Ministeeronni Haajaa Alaa Ameerikaa fi Raashiyaa Dhimma Yukireen Irratti Mari’atan
Antooni Biliinken Barliin jiru
Rakkoo Raashaa fi Yukreen Furuuf Carraan Diplomaasii Jira: Bliinkan
Haleellaan Dahqqabe Nu Gaddisisee Jira: Mootumaa Itiyoophiyaa
Ripxe Loltoonni Houthi Tokkummaa Emireetota Arabaa Irratti Haleellaan Raawwatan Lubbuu Namaa Galaafate